देउवाले प्रचण्डलाई ढुक्कले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउनको लागि गरे ठाडो प्रस्ताव ! के गर्लान प्रचण्ड ? « Light Nepal
देउवाले प्रचण्डलाई ढुक्कले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउनको लागि गरे ठाडो प्रस्ताव ! के गर्लान प्रचण्ड ?
Published On : 13 January, 2018 6:15 pm
श्रोत – रिपोटर्स क्लब
काठमाडौं, ४ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना, त्यागी नेता केशव रेग्मीको निधन भएको छ ।